နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်တို့ကို အများပြည်သူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားအောင်လှုံ့ဆော်၊ လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုပြီး ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) နဲ့ အမှုတတွဲထဲ စွဲချက်တင်ထားပေမဲ့ တရားလိုပြသက်သေတွေကို မေးမြန်းစစ်ဆေးပြီးသလောက် ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်လောက်အောင် မခိုင်မာဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။ ၅၀၅ (ခ) အမှုအပါအဝင် နေပြည်တော်အထူးတရားရုံးမှာ ဒီနေ့ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့ စစ်ဆေးခဲ့တာနဲ့ပါတ်သက်လို့ ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကို မခင်ဖြူထွေးပြောပြပါမယ်။
ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၆ ရက် နေ့ပြည်တော် သီးသန့်တရားရုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲထားတဲ့ အမှု ၂ ခုအတွက် ကြားနာစစ်ဆေးပါတယ်။ အများပြည်သူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားအောင် လှုံ့ဆော်၊ လုပ်ဆောင်မှု ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)၊ သဘာဝဘေးဒဏ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ အမှု ၂ ခုအတွက် စစ်ပါတယ်။ အမှု ၂ ခုလုံးအတွက် တရားလိုပြသက်သေတွေကို စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့နဲ့ အမှုတတွဲထဲဖြစ်တဲ့ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ အမှုမှာ တရားလိုပြသက်သေတွေရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေက ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ သက်သေပြနိုင်လောက်အောင် မခိုင်မာဘူးလို့ ရှေ့နေ ဒေါ်စန်းမာလာညွှန့်ကပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဖမ်းဆီးခံထားရချိန် ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နဲ့ ၁၃ ရက်နေ့တွေမှာ NLD ဗဟိုက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက် ၂ စောင်ကို တရားလိုဘက်က သက်သေအဖြစ် တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
"အဲစာရွက် ၂ရွက်ကို သူတို့ Page ကနေထုတ်တယ်ပြောတယ်။ NLD Page တင်တယ်ပေါ့။ အဲတော့မေးတယ်။ အဲကနေထုတ်တယ် ဘယ်သူတင်တယ်ဆိုတာကို ထွက်ဆိုချက်မှာ ထွက်ဆိုထားတာ မရှိဘူး။ နောက် ၁၃ရက်နေ့ကစာ ဆိုလည်း သူ့ရုံးကနေ Fax ကနေထုတ်တယ်ပြောတယ်။. သူပြောတာဘဲသိတယ်။ ဘယ်လိုထုတ်တယ်ဆိုတာသက်သေမသွင်းထားဘူး။ ၂ချက်ရှိပြီပေါ့နော်။ နောက်ပြီးတော့ စာထုတ်ချိန်မှာ သူတို့တွေကဖမ်းခံထားရတာ။ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့တောင် အဆက်အသွယ် ပြတ်နေတာ။ ခုကျတော့မှထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာ စာထုတ်တဲ့အတွက် ဆိုတော့ ထိန်းသိမ်းခံရတုန်းထွက်တယ်။ ဘယ်သူ့လက်မှတ်လဲမပါဘူး။ ဆိုထဲကတရားမဝင်ဘူးပေါ့. တရားလိုကော တရားလိုပြသက်သေ ၂ယောက်စစ်ပြီးပြီ သူတို့သွင်းတဲ့စာကို ဘယ်ကထုတ်ပါတယ် ဆိုတာကိုတောင် သူတို့မပြောဘူးလေ သက်သေမပြနိုင်ဘူးလေ။ တင်တယ် ဘယ်နေ့ကတင်တယ် ဆိုတာ သူသေချာပြောရမှာလေ။ နောက်တချက်က ဒါကြီးကတရားမဝင်ဘူးဆိုတာကို ပေါ်ပေါက်နေ ပြီလေ။"
ပြီးခဲ့တဲ့ ရုံးချိန်းမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ အမှုအတွက် တရားလိုတင်တဲ့ သက်သေတွေဟာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနဲ့ မညီ ဘူးဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေတွေက ပယ်ချခဲ့ပေမဲ့ တရားသူကြီးက လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မနေ့ ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့က ခရိုင်တရားရုံးမှာ အယူခံဝင်ခဲ့ပေမယ့် ခရိုင်ကလည်းလက်မ ခံဘဲပယ်ချလိုက်တာကြောင့် တိုင်းတရားရုံး တင်ပြဖို့ ရှေ့နေတွေဘက်က ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ တိုင်းတရားရုံးတင်ပြမယ့် အမှုအတွက် ဒီကနေ့ ကြားနာပွဲမှာ စစ်ဆေးမှုမလုပ်ဘဲ ရပ်နားဖို့ ဒေါ်စန်းမာလာ ညွှန့်တို့ဘက်ကတင်ပြခဲ့ပေမယ့် တရားသူကြီးက လက်မခံခဲ့တာကြောင့် ဒီကနေ့မှာ အမှုဆက်စစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမှုနဲ့ပတ်သတ်လို့ တရားမျှမျှတတဖြစ်အောင် အထက်အဆင့်ဆင့်ကို လိုအပ်ရင် အယူခံတက်ဖို့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကလည်းလိုလားတယ်လို့ ဒေါ်စန်းမာလာညွှန့်က ပြောပါတယ်။
"အမတို့ကမနေ့က ခရိုင်ကချရတဲ့ အမိန့်က ၇ရက် သို့မဟုတ် ၈ရက်နေ့မှာရမယ်ပြောတယ်။ မနက်ဖန် သဘက်ခါပေါ့။ ဒါမယ့် အမတို့က လာမယ့်အပတ်နေပြည်တော်သွားမှ မန္တလေးတိုင်းကိုတင်မှာပေါ့။ မနေ့ကအမိန့်ကို ပယ်တယ်ဆိုတဲ့ အတွက်ကတော့ အန်တီက တက်လို့ရတဲ့အထိတက်ပါဆိုတဲ့ အတွက် အမတို့ကတော့တက်မယ်။ စစ်တာကသူ့ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပေါ့။ အဲဒါကိုတော့အန်တီကဘာမှမပြောဘူး။ အမတို့ကတော့ပယ်လိုက်တာတွေအတွက်ကတော့ အမတို့အဆုံးထိတက်မှာပါ"
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး သမ္မတနဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတို့ကို ဖမ်းဆီးထားစဉ် စစ်တပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း NLD ပါတီရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို တရားလိုဘက်က သက်သေအဖြစ် တင်သွင်းပြီး ဒါတွေကြောင့် အများပြည်သူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားအောင်လှုံ့ ဆော်၊ လုပ်ဆောင် မှု ဆိုတဲ့ ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ တရားစွဲတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် နောက်ထပ်စွဲဆိုထားတဲ့ သဘာဝဘေး အန္တ ရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု၊ ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့စွဲတဲ့အမှုအတွက်လည်း ဒီနေ့ နေပြည်တော် သီးသန့်တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးကြား နာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမှုအတွက်တော့ တရားလိုသက်သေ တွေကိုစစ်မေးခဲ့တယ်လို့ ရှေ့နေတွေက ပြောပြပါတယ်။ ဒီနေ့ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အမှုတွေအတွက် နောက်တကြိမ်ရုံးချိန်း ကတော့ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၅၊ နိုင်ငံတော်လှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ)၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒပုဒ်မ ၈ ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၇ ၊ အများပြည်သူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားအောင်လှုံဆော်မှု လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ တို့ အပြင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ အမှု ၂ ခု၊ စုစုပေါင်း ၇ မှုနဲ့ တရားစွဲခံထားရပါတယ်။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုစှဲတဲ့ ၅၀၅(ခ)အမှု သကျသမေခိုငျမာ - ဒျေါစုရှနေ့ေ
နိုငျငံတျောသမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့၊ဒျေါအောငျဆနျး စုကွညျတို့ကို အမြားပွညျသူ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု ပကျြပွားအောငျလှုံ့ဆျော၊ လုပျဆောငျတယျဆိုပွီး ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၅၀၅ (ခ) နဲ့ အမှုတတှဲထဲ စှဲခကျြတငျထားပမေဲ့ တရားလိုပွသကျသတှေကေို မေးမွနျးစဈဆေးပွီးသလောကျ ပွဈမှုကြူးလှနျတယျဆိုတာ သကျသပွေနိုငျလောကျအောငျ မခိုငျမာဘူးလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ရှနေ့တှေကေ ပွောပါတယျ။ ၅၀၅ (ခ) အမှုအပါအဝငျ နပွေညျတျောအထူးတရားရုံးမှာ ဒီနေ့ ဇှနျလ ၆ ရကျနေ့ စဈဆေးခဲ့တာနဲ့ပါတျသကျလို့ ရနျကုနျကလာတဲ့သတငျးကို မခငျဖွူထှေးပွောပွပါမယျ။
ဒီနေ့ ဇူလိုငျ ၆ ရကျ နပွေ့ညျတျော သီးသနျ့တရားရုံးမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို တရားစှဲထားတဲ့ အမှု ၂ ခုအတှကျ ကွားနာစဈဆေးပါတယျ။ အမြားပွညျသူ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု ပကျြပွားအောငျ လှုံ့ဆျော၊ လုပျဆောငျမှု ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၅၀၅ (ခ)၊ သဘာဝဘေးဒဏျ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒေ ပုဒျမ ၂၅ ခြိုးဖောကျတယျဆိုတဲ့ အမှု ၂ ခုအတှကျ စဈပါတယျ။ အမှု ၂ ခုလုံးအတှကျ တရားလိုပွသကျသတှေကေို စဈဆေးခဲ့တယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ အကြိုးဆောငျရှနေ့တှေကေ ပွောပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့အတူ သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့၊ နပွေညျတျောကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာမြိုးအောငျတို့နဲ့ အမှုတတှဲထဲဖွဈတဲ့ ပုဒျမ ၅၀၅ (ခ) ခြိုးဖောကျတယျဆိုတဲ့ အမှုမှာ တရားလိုပွသကျသတှေရေဲ့ ထှကျဆိုခကျြတှကေ ပွဈမှုကြူးလှနျတယျလို့ သကျသပွေနိုငျလောကျအောငျ မခိုငျမာဘူးလို့ ရှနေ့ေ ဒျေါစနျးမာလာညှနျ့ကပွောပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတို့ ဖမျးဆီးခံထားရခြိနျ ဖဖေျောဝါရီလ ၇ ရကျနဲ့ ၁၃ ရကျနတှေ့မှော NLD ဗဟိုက ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ ကွညောခကျြ ၂ စောငျကို တရားလိုဘကျက သကျသအေဖွဈ တငျပွထားတာဖွဈပါတယျ။
"အဲစာရှကျ ၂ရှကျကို သူတို့ Page ကနထေုတျတယျပွောတယျ။ NLD Page တငျတယျပေါ့။ အဲတော့မေးတယျ။ အဲကနထေုတျတယျ ဘယျသူတငျတယျဆိုတာကို ထှကျဆိုခကျြမှာ ထှကျဆိုထားတာ မရှိဘူး။ နောကျ ၁၃ရကျနကေ့စာ ဆိုလညျး သူ့ရုံးကနေ Fax ကနထေုတျတယျပွောတယျ။. သူပွောတာဘဲသိတယျ။ ဘယျလိုထုတျတယျဆိုတာသကျသမေသှငျးထားဘူး။ ၂ခကျြရှိပွီပေါ့နျော။ နောကျပွီးတော့ စာထုတျခြိနျမှာ သူတို့တှကေဖမျးခံထားရတာ။ ပွငျပကမ်ဘာနဲ့တောငျ အဆကျအသှယျ ပွတျနတော။ ခုကတြော့မှထိနျးသိမျးခံရခြိနျမှာ စာထုတျတဲ့အတှကျ ဆိုတော့ ထိနျးသိမျးခံရတုနျးထှကျတယျ။ ဘယျသူ့လကျမှတျလဲမပါဘူး။ ဆိုထဲကတရားမဝငျဘူးပေါ့. တရားလိုကော တရားလိုပွသကျသေ ၂ယောကျစဈပွီးပွီ သူတို့သှငျးတဲ့စာကို ဘယျကထုတျပါတယျ ဆိုတာကိုတောငျ သူတို့မပွောဘူးလေ သကျသမေပွနိုငျဘူးလေ။ တငျတယျ ဘယျနကေ့တငျတယျ ဆိုတာ သူသခြောပွောရမှာလေ။ နောကျတခကျြက ဒါကွီးကတရားမဝငျဘူးဆိုတာကို ပျေါပေါကျနေ ပွီလေ။"
ပွီးခဲ့တဲ့ ရုံးခြိနျးမှာ ပုဒျမ ၅၀၅ (ခ) ခြိုးဖောကျတယျဆိုတဲ့ အမှုအတှကျ တရားလိုတငျတဲ့ သကျသတှေဟော လုပျထုံး လုပျနညျးနဲ့ မညီ ဘူးဆိုပွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရှနေ့တှေကေ ပယျခခြဲ့ပမေဲ့ တရားသူကွီးက လကျမခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ မနေ့ ဇူလိုငျ ၅ ရကျနကေ့ ခရိုငျတရားရုံးမှာ အယူခံဝငျခဲ့ပမေယျ့ ခရိုငျကလညျးလကျမ ခံဘဲပယျခလြိုကျတာကွောငျ့ တိုငျးတရားရုံး တငျပွဖို့ ရှနေ့တှေဘေကျက ပွငျဆငျနပေါတယျ။ တိုငျးတရားရုံးတငျပွမယျ့ အမှုအတှကျ ဒီကနေ့ ကွားနာပှဲမှာ စဈဆေးမှုမလုပျဘဲ ရပျနားဖို့ ဒျေါစနျးမာလာ ညှနျ့တို့ဘကျကတငျပွခဲ့ပမေယျ့ တရားသူကွီးက လကျမခံခဲ့တာကွောငျ့ ဒီကနမှေ့ာ အမှုဆကျစဈခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အမှုနဲ့ပတျသတျလို့ တရားမြှမြှတတဖွဈအောငျ အထကျအဆငျ့ဆငျ့ကို လိုအပျရငျ အယူခံတကျဖို့ ဒျေါအောငျ ဆနျးစုကွညျကလညျးလိုလားတယျလို့ ဒျေါစနျးမာလာညှနျ့က ပွောပါတယျ။
"အမတို့ကမနကေ့ ခရိုငျကခရြတဲ့ အမိနျ့က ၇ရကျ သို့မဟုတျ ၈ရကျနမှေ့ာရမယျပွောတယျ။ မနကျဖနျ သဘကျခါပေါ့။ ဒါမယျ့ အမတို့က လာမယျ့အပတျနပွေညျတျောသှားမှ မန်တလေးတိုငျးကိုတငျမှာပေါ့။ မနကေ့အမိနျ့ကို ပယျတယျဆိုတဲ့ အတှကျကတော့ အနျတီက တကျလို့ရတဲ့အထိတကျပါဆိုတဲ့ အတှကျ အမတို့ကတော့တကျမယျ။ စဈတာကသူ့ရဲ့လုပျထုံးလုပျနညျးပေါ့။ အဲဒါကိုတော့အနျတီကဘာမှမပွောဘူး။ အမတို့ကတော့ပယျလိုကျတာတှအေတှကျကတော့ အမတို့အဆုံးထိတကျမှာပါ"
စဈတပျကအာဏာသိမျးပွီး သမ်မတနဲ့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံတို့ကို ဖမျးဆီးထားစဉျ စဈတပျရဲ့ လုပျရပျကို ကနျ့ကှကျကွောငျး NLD ပါတီရဲ့ ထုတျပွနျခကျြတှကေို တရားလိုဘကျက သကျသအေဖွဈ တငျသှငျးပွီး ဒါတှကွေောငျ့ အမြားပွညျသူ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု ပကျြပွားအောငျလှုံ့ဆျော၊ လုပျဆောငျ မှု ဆိုတဲ့ ဥပဒကေိုခြိုးဖောကျတယျလို့ တရားစှဲတာဖွဈပါတယျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပျေါ နောကျထပျစှဲဆိုထားတဲ့ သဘာဝဘေး အန်တ ရာယျ စီမံခနျ့ခှဲမှုဥပဒေ ခြိုးဖောကျမှု၊ ပုဒျမ ၂၅ နဲ့စှဲတဲ့အမှုအတှကျလညျး ဒီနေ့ နပွေညျတျော သီးသနျ့တရားရုံးမှာ စဈဆေးကွား နာခဲ့ပါတယျ။ ဒီအမှုအတှကျတော့ တရားလိုသကျသေ တှကေိုစဈမေးခဲ့တယျလို့ ရှနေ့တှေကေ ပွောပွပါတယျ။ ဒီနေ့ စဈဆေးခဲ့တဲ့ အမှုတှအေတှကျ နောကျတကွိမျရုံးခြိနျး ကတော့ ဇူလိုငျလ ၁၃ ရကျနဖွေ့ဈပါတယျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဟာ အဂတိလိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေးဥပဒပေုဒျမ ၅၅၊ နိုငျငံတျောလှို့ဝှကျခကျြ ပေါကျကွားမှု ဥပဒပေုဒျမ ၃ (၁) (ဂ)၊ ပို့ကုနျသှငျးကုနျဥပဒပုဒျမ ၈ ၊ ဆကျသှယျရေး ဥပဒေ ပုဒျမ ၆၇ ၊ အမြားပွညျသူ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု ပကျြပွားအောငျလှုံဆျောမှု လုပျဆောငျမှုဆိုငျရာ ဥပဒပေုဒျမ ၅၀၅(ခ)၊ တို့ အပွငျ သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒေ ပုဒျမ ၂၅ နဲ့ အမှု ၂ ခု၊ စုစုပေါငျး ၇ မှုနဲ့ တရားစှဲခံထားရပါတယျ။